Soo-dejinta Embraer EMB-120 Mega Xirmooyinka FSX & P3D - Rikoooo
downloads 22 828
Eric Cantu, Jaantuska Eagle Rotorcraft, Guddi ka kooban Marcus Gama, oo ay soo abaabuleen Chris Evans, ayaa lagu soo hagaajiyay iyadii oo ay hagaajisay Rikoooo
UNIQUE iyo xirmo dhammeystiran oo ah Embraer EMB-120 (model + cockpit virtual + 2d panel + dhawaaqyada shaqsiyadeed + buugga + hubinta + tixraaca + 34 dayactirka) 30-kursi-mataano-turboprop diyaaradeed oo laga soo saaray gobolka São Paul ee Brazil. Moodeelka waxaa sameeyay Eric Cantu, oo loo badalay hooyo FSX Qaab-dhismeedka Simulations Eagle Rotorcraft, sidoo kale waa la waafaqi karaa Prepar3D v4.
Xirmadan oo ay naqshadeysay Rikoooo (oo ay ugu mahadcelinayaan Chris Evans muraayadaha sawirka iyo dhiirigelinta) waxay la timid dib-u-hagaajinno fara badan oo kujira feylka Aircraft.cfg. Diyaaradda ayaa inta badan laga soo duubay qeybta 'Marcus Gama 2d' (oo u gaar ah EMB-120), goos gooska tooska ah ayaa laga soo dejiyay FSX KingAir dib-u-qaabeeyay cabbirradii EMB-120. Codadka waxaa iska leh Adam Murphy waxaana si gaar ah loogu talagalay inay ku habboonaan karaan qaabkan. Waxay kujirtaa dhawaaqyada kujira biibiilaha sida GPWS iyo qaylo-dhaan kaladuwan (taxaddar muuqaalkan uusan la shaqeynaynin P3D v4 maxaa yeelay cabirka mas'uul ka ah tani waa mid aan iswaafaqsaneynin 64 qulqul, wax kasta oo kale waa ok).
Buuggan ku yaal Dukumentiyada (ama Dukumentigeyga) "Folder Doc" waa macquul oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si degdeg ah u barato nidaamka aasaasiga ah, oo ay ka mid tahay bilaabista Cold & Dark.
Ujirooyinka waa kuwo tayo fiican leh waxayna ku jiraan "khariidadda boodka" taas oo ku dareysa lakab 3D si ay u muujiso oscillada dusha sare ee diyaaradda.
Liiska Ereyada: Sky Bahamas, Brasilia 300th Livery, Australasia, Airnorth, Delta Connection, Continental Express, United Express, KLM excel, British Airways, FEDEX, DHL, GoAir Citylink, USAir Express, Old Express (midabo cusub) Sky Sports 25, Palmeto Express, Comair, Skywest, Airjet, Swiftair (Spain), midab madow, Rabshadaha Boorama, Air France, Air Minas, Forca Aérea Brasileira, SkyWest, Rio Sul (PT-LXN), Passaredo (PT-SLE ), Rio Sul (PT-SLE), Rico (PT-WZM), Khibrad, Forca Aérea Brasileira (VC-97), Forca Aérea Brasileira (YC-97).
Qodobada la ogaadaa (dhammaan wixii horey loogu sharxay buuga):
Markaad bilowdo duulimaad waxaad arkaysaa in qalabka qaarkood aan la adeegsan oo ay ku jiraan PFD, MFD iyo raadiyaha, taasi waa caadi inaad ku bedesho "Master Master" ilaa "On" oo ka timaada dhinaca 2d.
Boodhaha lagu furfuro (autopilot) (AP) ayaa ku taal xakamaynta xayawaanka korka ka sarreeya raadiyaha (fiiri dheeraad ah).
Suurtagal maaha in gawaarida gawaarida la dhigo adigoon marka hore joojin laydhka badbaadada huruudda ah ee ku yaalla korantada (oo aan loo baahnayn inaad weydiiso sababta aadan uga dhaafin 10% N1).
Author: Eric Cantu, Jaantuska Eagle Rotorcraft, Guddi ka kooban Marcus Gama, oo ay soo abaabuleen Chris Evans, ayaa lagu soo hagaajiyay iyadii oo ay hagaajisay Rikoooo